SMD-80B taratasy lovia milina fanoratana taratasy avo lenta sy mpanamboatra | Masinina Chengda
Masinina lovia taratasy SMD-80B
SMD-80B dia natao hanamboarana vilia taratasy lehibe sy siny ho an'ny lasopy, popcorn ary sakafo nendasina.
1.Longitudinal axis gear drive.Cylindrical karazana barika endriny fanondroana cam. Ity famolavolana ity dia manatsara ny endriny ao anaty masinina, miantoka ny fahamendrehan'ny masinina, avo lenta ny fampisehoana, ka afaka manao ny faritra tsirairay amin'ny fandrindrana ny masinina, hisorohana ny fifandonana amin'ny ampahany amin'ny milina .
Fitaovana fanamafisam-peo 2.Swissisie dia ampiasaina amin'ny famehezana ny vatan'ny kaopy sy ny farany ambany, mafana ny voalohany aloha alohan'ny hanomezana sakafo, ka hanatsarana ny vokan'ny hafanana ary hanampy amin'ny fiantohana.
3.Ny masinina manontolo dia famolavolana karazana boaty, famenoana menaka amin'ny alàlan'ny rafitra fanosotra spray, izay afaka mampihena ny fahasimbana, ny fihenan-kery mahomby mba hahafahan'ny milina mihazakazaka haingana.
4.Ny baiko curling voalohany dia mampiasa ny famolavolana fihodinana anatiny, ho fanatsarana ny fanamafisana ny taratasy. Ny baiko fanasitranana faharoa dia mampiasa fikirakirana hafanana, ny vavan'ny curling dia tsy hoe miseho ho tsara fotsiny fa mitazona ihany koa ny tsy fitoviana amin'ny refy.
Hafainganana 70-80 pcs / min
Cup size Diameter ambony: 150mm (max)
Diameter ambany: 120mm (max)
Hahavony: 120mm (max)
Akora 135-450 GRAM
fanahafana SISTEMA ARA-PANAHY ULTRASONIKA & mafana
Fivoahana 380V / 220V, 60HZ / 50HZ, 14KW
Air compressor 0,4 M³ / Min 0,5MPA
Lanja afa-karatsaka 3,4 TONS
Ny refin'ny masinina 2500 × 1800 × 1700 MM
Ny refin'ny mpamory kaopy 900 × 900 × 1760 MM
Ampiasao ny takelaka roa, lamina indroa hamoronana kaopy taratasy .Ny masinina SMD-80B dia vokatra fanavaozana izay miorina amin'ny masinina kaopy vita amin'ny takelaka tokana. Ny masinina dia mandray endrika misokatra, famolavolana fizarana tapaka, familiana fitaovana, famolavolana axis longitudinal Ka azon'izy ireo zaraina ara-dalàna ny fizarana tsirairay
Ny masinina manontolo dia mandray ny diloilo Spray, ka mampihena ny abrade, ary manamboatra heaterina leister Switzerland ho an'ny body cup sy ny famehezana taratasy ambany izy; ary ny fikorianan'ny solika silika fehezin'ny PLC & valizy elektromagnetika, amin'ny làlana roa ho an'ny famolavolana ambony, ny fihodinana voalohany dia ny fihodinana ambony, ary ny faharoa ny fanafanana sy ny famolavolana, ka ho tonga lafatra kokoa ny kaopy.
Ny rafitra PLC dia mifehy ny fizotry ny famoronana kaopy iray manontolo. Amin'ny alàlan'ny fananganana rafitra mpamantatra ny tsy fahombiazan'ny photoelectric sy ny famahanana fanaraha-maso servo, azo antoka ny fahombiazan'ny masinin-tsika taratasy, ka manome asa haingana sy maharitra. Ny milina dia afaka mijanona tsy miasa rehefa misy tsy fahombiazana. Amin'izany dia afaka manatsara be ny fenitry ny fiarovana ny asa sy mampihena ny herin'ny asa.
SMD-80B milina fanaovana kaopy taratasy manan-tsaina manamora ny fananganana kaopy taratasy, ity milina ity dia afaka mamita ny famahanana taratasy, mametaka, manome sakafo ambany-ambany, manafanana, mametaka, mamorom-bava, manangona kaopy sns. noho ny fanaovana lovia taratasy misy haavo 60-120mm.
Teo aloha: PLM-80 Masinina Takelaka azo apetaka
Manaraka: SMD-80A Masinina vita amin'ny taratasy vita amin'ny rindrina roa